Shil gaari oo ka dhacay duleedka Hargeysa +Sawirro – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Shil gaari oo ka dhacay duleedka Hargeysa +Sawirro
Shil gaari oo ka dhacay duleedka Hargeysa +Sawirro
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Hargeysa ee Xarunta Soomaaliland, ayaa sheegaya in maanta shil khasaaro geystay uu ka dhacay duleedka Magaalada Hargeysa.
Shilka ayaa yimid Kadib markii ay isku Dhaceen Gaari Bus ah oo Rakaab siday kana yimid Magaalada Hargeysa, iyo Gaari kale oo iskaroga ah, waxaana la tilmaamay in Shilkaasi ay ku dhaawacmeen labo Ruux oo ka mid ah Rakaabkii Gaariga Buska ah saarnaa.
Ilo wareedyo ayaa inoo sheegay in labada Ruux ee ku dhaawacmay shilka gaari loo qaaday isbitaal ku yaalla Magaalada Burco ee Xarunta Gobolka Togdheer.
Gadiidka isku dhacay ayaa soo kal gaaray burbur xooggan, waxaana hataan ay yalaan goobtii ay iskugu dhaceen oo ah Deegaanka Burcada yar oo ku yaalla duleedka Magaalada Hargeysa ee Xarunta Maamulka Soomaaliland.
Previous articleArday lagu Rasaaseeyey Muqdisho
Next articleGodax barre oo ka qoomameeyay hadal uu horay u yiri
Matalaada Gobolka Banaadir ee Madaxweyne Farmaajo la qayliyay waa boor isku...